UBobbi Brown usimangaza ngesaphulelo sika-30% emikhiqizweni yakhe | Bezzia
Ungaphuthelwa isaphulelo sika-30% kumikhiqizo kaBobbi Brown
USusana godoy | | Maquillaje
Bobbi Brown ingenye yemikhiqizo emikhulu yezimonyo futhi ngenxa yalokho siyayithanda imikhiqizo yabo. Imikhiqizo ukuthi isizini ngayinye ifika neyakamuva, ukusinakekela kangcono isikhumba sethu. Kungakho kulokhu, sibona ukuthi banesaphulelo esingu-30%, kudonsela ukunaka kwethu, uma kungenzeka.
Kuyithuba lethu lokuthola konke okudingayo! Isikhwama sethu sezindlu zangasese sizosibonga kodwa isikhumba sethu futhi ubuhle futhi na ngaphezulu. Ungajabulela izindebe zomlomo ezinhle kakhulu, izithunzi noma okugqamisa, phakathi kweminye imikhiqizo eyisisekelo. Uzoqala ngamuphi?
1 Isaphulelo samehlo sikaBobbi Brown
2 I-BB Cream oyidingayo empilweni yakho
3 Nikeza izindebe zakho zikhanye futhi zifake umbala
4 Ukuthinta kwenkanyiso ekwakhekeni kwakho
Isaphulelo samehlo sikaBobbi Brown
lapho sikhuluma ngayo izithunzi zamehlo, sinezinketho eziningana. Enye yazo yilokho okwethulwa kithi ngendlela yakudala njengephalethi. Kuyo sizoba nemibala eyi-9 isiyonke esingenza ngayo izimonyo ezinhle kakhulu, ngoba inenhlanganisela yamathoni. Ukusuka kumatte kuya kokucwebezelayo noma kwensimbi. I-edition elinganiselwe futhi yakhelwe ngumculi waseLondon ogama lakhe linguMorag Myerscough. Vele, ngakolunye uhlangothi, mhlawumbe ukhetha isithunzi esimise ipensela. Futhi kungenye yabathengisi abahamba phambili futhi kunjalo, iyashesha lapho isetshenziswa. Izokunikeza ukuthinta kokukhanya lapho uyidinga. Yimuphi kubo ohlala?
I-BB Cream oyidingayo empilweni yakho
Izimise njengenye yezikhulu zobuhle futhi ayisimangazi. I-BB Cream isisiza ukukhipha isikhumba futhi lokho kusenza sikhohlwe ngokungapheleli okuncane okuvame ukuvela. Ngaphezu kwalokho, ihlinzeka ngokuthinta okuthe xaxa ebusweni, ngasikhathi sinye lapho ibuyisela khona ukukhanya kulezo zindawo ezingabonakali kahle. Ngaphandle kokukhohlwa ukuthi ukuhamba kwesikhathi nakho kubeka leyo migqa yokuveza okufanele ifiphazwe ngomkhiqizo ofana nalona. Ngokwalokho esikubonayo, wenza umsebenzi ongaphezu kowodwa futhi siyakuthanda lokho. Ngaphezu kwalokho, ivikela emisebeni yelanga. Yini enye esingayicela?
Nikeza izindebe zakho zikhanye futhi zifake umbala
UBobbi Brown naye ubheja ku lipstick ukubanika lokho kuthinta umbala kepha ngasikhathi sinye, kokuvikelwa. Njengoba izonakekela isikhumba esibucayi sendawo enjengale. Ngaphezu kwalokho, iziphatha njengebhalisamu elikhulu, ngoba lizonikeza amanzi amaningi ngisho nasezindebeni ezomile. Lokhu kwenza umphumela ungaphezu kokumnandi. Manje usungazuza nakuleso saphulelo esingu-30%. Indlela enhle yokuqala ukuwa, ngakho konke ukukhanya, umbala nokunakekelwa komkhiqizo omuhle.
Ukuthinta kwenkanyiso ekwakhekeni kwakho
Njengoba sifuna fiphaza noma ufihle ezinye izindawo, abanye badinga ukuthinta ukukhanya ukubenza babukeke bemvelo ngokwengeziwe. Ukuzigqamisa, akukho okungcono kunokukhetha izinkanyiso. Zingesinye sezisetshenziswa ezinhle kakhulu esinazo ngakho-ke, amafemu afana noBobbi Brown awakwazanga ukuwabeka eceleni. Kungakho ama-palettes aqhakambisa kakhulu eba ayisisekelo. Isikhathi sokunikeza ubuso bakho isiphetho esihle futhi uzokufeza ngomkhiqizo ofana nalona, ​​nawo onesaphulelo sawo.
Kulokhu, umphumela uyi ukuthinta okubomvana esikhunjeni, okuthopha kakhulu. Ngokuthinta okukodwa, ungavele uthokozele okuyisisekelo okufana nalokhu. Njengoba sibona, kubonakala sengathi ukunikezwa kukaBobbi Brown kulungele ukusithanda ngazo zonke izindlela, ngokobuhle nasesikhwameni. Uma ufuna nokuzama, kungumzuzu wakho omuhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Maquillaje » Ungaphuthelwa isaphulelo sika-30% kumikhiqizo kaBobbi Brown
Izinhlobo ezi-6 zezihlalo zekhaya lakho
Izinto ongazibona eFrankfurt